Malunga nathi - Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd.
I-auger rock auger
YANTAI DONGHENG OOMATSHINI CO., LTD
Umenzi wokuncamathisela kobungcali kunye nomthengisi wolwakhiwo, oomatshini bezolimo kunye namahlathi, ezibophelele kumgangatho ozinzileyo wabathengi.
Ngama-12 eminyaka yethu yokuvelisa kunye nokuthengisa amava, senze i-brand KINGER yethu. Njengomenzi ophambili womatshini wokuncamathelisa we-excavator, sizinikezele ekubeni kwindawo ephambili kubuchwephesha kunye nokuyila. Ngale ndlela, imveliso ye-KINGER ithunyelwe kumazwe amaninzi, njenge-Jamani, iDenmark, i-Russia, i-USA, i-UK, i-Canada, i-Netherlands , ENew Zealand, eIndonesia, neyamkelwa ngabathengi kwihlabathi liphela.
Umvelisi kunye nomthengisi woomatshini bokwakha nezixhobo zehlathi
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. yasekwa ngo-2010 kwaye waba kwindawo ephambili excavator attachments oomatshini ngesantya ekhawulezayo.
Inkampani yethu iphumelele i-ISO9001: 2015 kunye ne-CE. Singamashishini aphakamileyo obuchwephesha besizwe kunye nomsebenzi, ubukhethekileyo kunye nokuyila. Inkampani yethu inamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ukuza kuthi ga ngoku, siye safumana amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-30. Oko kwenza ukuba i-Dongheng ibe sisikhundla esiphambili kushishino loomatshini bokwakha baseTshayina.
2. Ishishini eliphambili
IYantai Dongheng Machinery Co., Ltd. izibophelele kwi-R & D, ekwenziweni nasekuthengiseni isincamathelisi se-excavator kulwakhiwo, ezolimo kunye noomatshini bamahlathi.
I-KINGER eyintloko yeshishini ine-Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw head, Mixer bucket, Mixer bowl, Hedge trimmer, Chain trencher, Tree shear, Stump planer, Hydraulic hammer, Quick coupler, brushing swewing and other construction machines uncamathiselo.
Kwinkqubo yokulandela imveliso, sinenani labasebenzi bokuthengisa abaya kwenza iinzame zokuphuma kwaye benze ukuba umgangatho, ukuhanjiswa, ixabiso okanye iimfuno ngokweemfuno zakho zokuhlangabezana nokulindelweyo kangangoko kunokwenzeka. , siqinisekisa umgangatho weemveliso zethu, sinamathela kwimikhwa yokuziphatha kwaye sigcina iimfihlo zorhwebo.
Imveliso yethu isebenzisa ubuchwephesha obuphezulu kunye nobutsha, busetyenziswa ngezinto ezilungileyo kwaye zixhaswe ziimveliso ezahlukeneyo zokuhlola kunye nokuvavanya ukuqinisekisa ukuba umgangatho uzinzile kunye nokusebenza ngokugqwesileyo.
Ukongeza, siqinisekisiwe ngumboneleli wegolide kwiAlibaba.Sinokuhambisa iimpahla nge-100% ngesiqinisekiso sexesha.
Sinikezela ngeyure ezingama-24 ngenkxaso yezobuchwephesha kunye nenkonzo ekwi-intanethi Ngenxa yokuba sineqela lethu le-R & D, ukuba ufuna uncedo kwicandelo lobugcisa, sinokukunika uncedo.
Ukuba unemibuzo emva kokuthenga nayiphi na imveliso, nceda ungathandabuzi ukusishiya umyalezo. Siza kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza emva kokujonga.
Fumana iindaba zamva nje kuthi
IShanxi Road eMpuma, iQixia yoPhuhliso lwezoQoqosho, Yantai, Shandong, China